‘घरमा आगो लगाएर कोही सुरक्षित हुँदैन’
मुलुक स्थानीय सरकारको करबाट आतंकित छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो विषय ‘अतिरञ्जित’ ठान्छन्। उनले करको विषयलाई उचालिएको टिप्पणी गरे। यद्यपि, ओलीले हरिभक्त कटुवालको कविताको पंक्तिबाट निकै प्रभावित रहेछन् ‘जुनलाई टाढैबाट हेर प्रिय, नजिकबाट हेरे दाग देखिन सक्छ।’ उनले त्यो कविता उल्ट्याउन चाहेको बताउँदै भने, ‘नजिकै आएर मेरो र सरकारको दाग कोट्याऊ।’ अर्थात् ओलीले आलोचना र टिप्पणीलाई सगर्व स्वागत गर्ने बताए। सरकारको ६ महिने काम, सतहमा विवादित सवालमा केन्द्रित रहेर एपी–१ ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’मा टीकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्ताको संपादित अंश।
ओली ः ती कतिपय आन्तरिक पनि हुन्। मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु। प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपी गणना गरेर समृद्धि हासिल भो भन्ने भन्दा हरेक नेपालीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पायो कि पाएन, उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्, आर्थिक, सामाजिकसहित सबै हकअधिकार पायो कि पाएन भन्नेबाट मापन गर्छु अर्थात् मैले कुनै हल्लाका पछाडि कुद्न आवश्यक छैन। म प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैबाट चर्को विरोध सुरु भयो।
ओली ः सरकारले बुझाएन होला, कतिपयले बुझेनन् होला। तानशाही व्यवस्थामा चक्रपथमा पनि कफ्र्यु लगाएको होइन ? अनि म मात्रै होइन नि ! तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो चक्रपथको कफ्र्यु तोड्ने। त्यसको अर्थ तपाईं हामी जहाँको पनि कफ्र्यु तोड्ने होइन, कानुन नमान्ने होइन। तर, बलप्रयोग गरेर लोकतन्त्र आउन नदिन जुन व्यवहार गरिएको थियो, त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिएको थियो। त्यस्तो के भएको छ ? लोकतन्त्र खोसिएको छ र ?